Ukupakishwa koyilo ukuphucula ukuthengiswa kwemveliso | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukupakishwa koyilo ukuphucula ukuthengiswa kwemveliso
UPablo Gondar | | Idizayini yeMifanekiso, Ukuphefumlelwa
Packaging yokudala ukuphucula ukuthengiswa kwemveliso kunye nokufezekisa yima emarikeni Ingathetha impumelelo okanye ukusilela kwemveliso entsha ukuba iyakwazi ukubonakala kukhuphiswano lwayo. Kwimarike egcwele iimveliso ezininzi kunjalo kubalulekile ukuqaqambisa phakathi kwabanye kunye nokutsala abathengi ngenxa yeso sizathu uyilo loyilo lwe ukupakisha ikwazile ukunika umsebenzisi uluhlu olutsha lweemveliso ezibetha kakhulu apho inkangeleko, ukusebenza kunye nokuziphatha badlala indima ebalulekileyo xa kuthengiswa.
Izinto zendalo ohlonipha iplanethi yethu, ukupakisha okuvumela oko Ukusebenzisana komsebenzisi kunye nemveliso, kunye nokuhlanganiswa okupheleleyo kwe izindululo zoyilo ukuze umsebenzisi azive ukuba akathengi imveliso elula kodwa encinci umsebenzi wobugcisa oza nawo ekhaya.
La inkxalabo ngomhlaba kunye nenkunkuma yinto ehlala ihleli, iinkampani ezininzi zifuna ukwenza ifayile ye- umgca we-eco ehloniphekileyo nophakathi ukufikelela kumthengi oziva ngathi uluxanduva kwiplanethi yakhe, yiyo loo nto iinkampani ezininzi zigxile ekudaleni ukupakisha kwendalo kunye noxanduva, nokuba kunokwenzeka yitya isitya uqobo... yitya isitya! hayi okanye uyilahle kodwa wonwabele incasa yayo, le yinto esinokuyibona kwikhonteyina yenkampani ye-KFC apho umthengi anokutya khona isikhongozeli. Ngokuqinisekileyo yindlela entle yokwenza ukunciphisa inkunkuma ngendlela ebonakalayo.
Ukuba sithetha ngesitayile esithile kolu hlobo lokupakisha lwe iimveliso zezinto eziphilayo Singathi banazo iimpawu ngokubanzi ezenza ukuba bavele kwezinye iimveliso ezingezizo ezendalo.
imathiriyeli ibhokisi esebenzayo
Ii-inks mnyama, ngwevu, mdaka, luhlaza.
Uyilo icocekile kwaye icocekile
Umzekelo yemveliso (isitampu ukuveza ngaphakathi)
Zonke iimveliso zine isimbo sokubonisa Kuba ziyilelwe ngendlela yokuba zibe ngaphakathi kweqela, yinkqubo eyenza ukuba umthengi aqonde ukuba yeyiphi imveliso abayibonayo kwishelufa yevenkile. Ukuba sihambahamba ngamakhambi kwaye siqala ukujonga Uyilo lwemveliso eco-friendly siyakuqonda ukuba bane imbonakalo efanayo eyahlukileyo ngokupheleleyo kwinto esinokuyibona kwivenkile eqhelekileyo, oku kwenziwa kuba sele sinxulumene noko isitayile esimiselweyo olu hlobo lwemveliso.
Xa olu hlobo lokupakisha lwenziwe, kuyenziwa kugcinwa engqondweni uthotho lwe iziseko zendalo ezivelayo kwifayile ye- isigaba sokuyila ukwazi ukwenza isikhongozeli esisebenza ngokuchanekileyo, okoko nje sithetha ngento elungileyo Uyilo lwe eco le miba iya kujongwa ngeglasi yokukhulisa.
Isikhongozeli sinokuba njalo iyasebenza kwaye iluncedo Umsebenzisi akanakukhusela nje kwimveliso, ukuba injongo yemveliso iyonyuswa kuyilo lokupakishwa kwayo fumana umsebenzisi onwabele kuyilo olo.
Kuyilo lwesikhongozeli esisibona kwifayile ye- umfanekiso ongezantsi sinokubona ukuba yenziwe njani dibanisa uyilo olulungileyo kunye nokusetyenziswa kunye nokuchukumisa okuthile kwe-eco ngenxa yokusebenzisa izinto ezinxulumene nesitayile, ezinjengekhadibhodi. Umsebenzisi unokuthatha ikofu kunye nezinye iimveliso kunye.
Amaxesha amaninzi siza kudibana ukupakisha okudala Bafuna ntoni fumana ingqalelo yethu ngokusetyenziswa kwezinto ezibonakalayo ezinomtsalane ezifezekisayo ukuphucula imveliso. Kumfanekiso ongezantsi sinokubona ukuba kuyilo lwefayile ye- isikhongozeli sebrashi yokupeyinta kongezwa ubuso obunombono wokulinganisa intshebe.
Njengomthandi woyilo kunye neemveliso zentsusa, kumaxesha amaninzi andikwazi ukumelana nesilingo ndithabathe imveliso ngenxa yoyilo lwayo olulungileyo, Kuyinto eqhelekileyo kakhulu ukuqokelela olu hlobo lokupakisha ukuba nazo njengezalathiso ezibonakalayo zomsebenzi wexesha elizayo. Ukuba awufuni ukugcwalisa indlu yakho ngezikhongozeli, into onokuyenza kukuthatha iifoto zabo kwaye uzigcine.
Dlala ngemilo yemveliso inokuba yenye indlela yokwenza ifayile ye- uyilo lokupakisha lwantlandlolo njengokuba kunjalo kwesi sonka sesonka esidlala ngokumila kwaso Nxibelelana nemveliso kwimbungu.
Ngolu luyilo asiboni nawuphi na umsebenzi osebenzayo kumsebenzisi kodwa ukuba sibona umdlalo kunye nendlela ye yenza ubabalo xa sibona imveliso kwiishelufa zevenkile enkulu. Ngokuqinisekileyo ngumsebenzi omkhulu obonakala ngokwawo elula kunye nobuchule ukubona olo lwalamano lungazange lubonwe mntu ngaphambili.
Isikhongozelo yinto yokuqala esiyibonayo Xa sijonga imveliso ngesi sizathu kufuneka siqinisekise ukuba ukupakisha kwethu kunomtsalane kumsebenzisi ngaphandle kokulibala oko kufuneka isebenze kwaye sigxile kwiziseko ezinengqiqo ekufuneka sizicwangcisile kwinqanaba loyilo. Kungayimpazamo ukwenza ikhonteyina yemveliso yendalo kunye nezinto eziyingozi ngokupheleleyo kwiplanethi, oku kunokuba yiyo ungqubano nefilosofi yemveliso.
Kwihlabathi loyilo Yonke into kufuneka igwetyelwe Ngendlela yokuba izindululo ezicetywayo zisengqiqweni kwaye zisebenze, oku akuthethi ukuba siyabulahla ubuchule bokuyila kodwa kufuneka sijongane nabo ngendlela echanekileyo. Ikhonteyina ibalulekile njengomfanekiso wequmrhu Kungenxa yoko le nto kufuneka yonke into ibotshelelwe kakuhle xa sisebenza kolu hlobo lweprojekthi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Ukupakishwa koyilo ukuphucula ukuthengiswa kwemveliso
Ifilimu yokuqala epeyintiweyo yeoyile izisa uVan Gogh ebomini
Nge-Okthobha umceli mngeni kubazobi abanomdla